Ukubuyiselwa Kwemininingwane, Ukubuyiswa Kwefayela ne-Software Recovery Software ngu DataNumen
Imikhiqizo Yesoftware Yokubuyiswa Kwemininingwane
Sinikezela ngesoftware ethola umklomelo yokuthola idatha yamafayela e-MS Office, ukutakula i-imeyili, okugcina umlando kanye namafayela wokusekelayo, imininingwane yolwazi, izithombe nemibhalo, nokunye okuningi.
Uhlu lomkhiqizo ogcwele
Ingobo yomlando / Isipele
Isithombe / Idokhumenti
Siyakwamukela ku DataNumen
DataNumen ungumholi wezwe kubuchwepheshe bokutakula idatha. Sinikezela ngezixazululo zokutakula idatha kufaka phakathi imikhiqizo yethu ewina imiklomelo yesoftware, izinsizakalo zokuthola kabusha idatha, kanye nekhithi yokuthuthukisa isoftware (SDK) yonjiniyela.
Ubufakazi Bekhasimende Lethu
Umkhiqizo wakho ubungcono kakhulu futhi wenze i-most! Kepha angicabangi ukuthi kukhona okungabuyisa imininingwane engiyi lost. Ithole enganginakho vele, okwakungaphezulu
... Funda kabanzi
Umkhiqizo wakho ubungcono kakhulu futhi wenze i-most! Kepha angicabangi ukuthi kukhona okungabuyisa imininingwane engiyi lost. Ithole engangivele nginakho, okwakungaphezulu kwemikhiqizo yangaphambilini, kepha alikho kulawo masonto e-3.5 wedatha ebelahlekile. Ukube bengicabanga ukuthi imininingwane elahlekile ikhona, bengizokhokha impela u- $ 50 ukuyibuyisa, futhi NGIHLE ne- $ 100 ukube benginethemba lokuthi yonke imininingwane engekho ibikhona. Kepha bekungafanele, ngakho-ke bekungafanele u- $ 100.
UNksz Mascha Fujimoto
Uhlelo oluhle kakhulu, nokusekelwa kwamakhasimende okuhle kakhulu (phakathi kokusekelwa kwamakhasimende okuhle kakhulu engikubonile).
Bengisebenzisa i-Outlook 2010 ekugcineni kwami
Bengisebenzisa i-Outlook 2010 kukhompyutha yami yokugcina, ebisebenzisa iWindows 7. Leyo khompyutha yafa, yize ngenhlanhla, ngangigcina wonke amafayela wami (kufaka phakathi amafayela we-Outlook pst) kwi-drive yangaphandle. Kepha ngikhohlwe iphasiwedi yefayela le-pst elibethelwe eliqukethe i-14.5 GB ye-imeyili nokunamathiselwe (cishe iminyaka eyisikhombisa ye-imeyili, eminye yayo ebaluleke kakhulu kimi).
Ngilande uhlobo lwesilingo lwe DataNumen Outlook Password Recovery (hhayi ukuthi wenze iphutha ngokulungiswa kwe-Outlook noma i-Outlook Drive Recovery) kanye ne- starngicubungule inqubo yokutakula, kepha ngakhansela ukusebenza ngemuva nje kokuthi kuqalile ukuze ngikwazi ukukopisha ifayela le-pst elibethelwe kwenye indawo ukuze ngiqiniseke ukuthi nginesipele (ngikhohlwa ukuthi sengivele ngibe nesipele kumkhombandlela wami we-Outlook Files). Ngemuva kwalokho, angibange ngisakwazi ukusebenzisa inguqulo yesilingo futhi.
Ngithenge okufushane umnyuziki, kepha bekungekho ndlela yokuthi ngifake i-ID yami yomsebenzisi nekhodi kukhodi yesilingo ngokwemiyalo yokuguqula inguqulo yesilingo ibe inguqulo ephelele. Ngakho-ke ngithumele i-imeyili DataNumen. Kungakapheli amahora angama-12, bangithumelele i-imeyili isixhumanisi sokulanda ukuthola inguqulo ephelele, futhi bangiyale ukuthi ngikhiphe inguqulo yesilingo bese ngifaka okufushane umnyuziki.
Angibanga nankinga yokukhipha inguqulo yesilingo futhi ngifaka okufushane umnyuziki (inguqulo 1.2.1.0), ngathola ngokushesha iphasiwedi ukufinyelela ifayili le-pst elibethelwe.
Ngivele ngasebenza futhi ukuze ngibone ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani. Uhlelo luchaze ifayili lami le-pst ngomzuzu owodwa namasekhondi angama-47.
Ngenhlanhla, amanye amafayela amaningi we-pst kumkhombandlela wami we-Outlook Files, njengamafayela afakwe kungobo yomlando, awazange abethelwe. Angikhumbuli ukuthi ngilibethele kanjani leli fayela le-pst. Kufanele usebenzise inguqulo yesilingo (uyisebenzisa kanye) ukuze uqiniseke ukuthi ifayili le-pst odinga ukufinyelela kulo libethelwe.
Into yokugcina engizoyisho: Angazi ukuthi inguqulo yesilingo ibizokhipha ifayili le-pst elikhulu njengaleli, noma ukuthi ngabe usayizi wefayela awusebenzi ngohlobo lwecala.
Lolu hlelo lusindisa impilo, futhi ukwesekwa kwamakhasimende bekukuhle kakhulu (i-10 esikalini esingu-1 kuye ku-10). Ngisanda kuthola cishe iminyaka eyisikhombisa ye-imeyili. Akukholakali!
Mashi 12, 2021
Sikufisela inhlanhla ngezinhlelo zakho. Mancane futhi enza ngqo lokho okuchaziwe.
I-interface kulula ukuyilandela futhi uyiqonde. Nginguye
I-interface kulula ukuyilandela futhi uyiqonde. Ngilinde ezinye izinhlelo ezintsha ezivela kuwe.
Umqondisi we-IT Esethathe Umhlalaphansi
IBlythewood SC, e-USA
Kwi-HDD eyonakele ngempela (efomethwe kabili) kwaba ukutakula okuphelele.
Ithuluzi elenza lokho okuthembisayo!
UNjiniyela Osewathatha Umhlalaphansi
Febhuwari 27, 2021
Ngiyabonga ngosizo lwakho.
Uhlelo lokusebenza lusebenza kahle. Isisekelo naso silungile.
ul. ULeśna 17C, 62-006 Gruszczyn
Ngomhlaka 23, 2020
I-Outlook idlalwe kabi, ngemuva nje kokuvuselelwa kweWindows uhlelo lwami lwe-imeyili i-Outlook iyekile ukusebenza. ngisebenzise datanumen umkhiqizo ukuhlela kabusha i-imeyili
I-Outlook idlalwe kabi, ngemuva nje kokuvuselelwa kweWindows uhlelo lwami lwe-imeyili i-Outlook iyekile ukusebenza. ngisebenzise datanumen product ukuhlela kabusha amafolda e-imeyili kahle futhi kwasebenza. Ukuphela kokufanele ngikwenze ukusebenzisa uhlelo ukulungisa idatha, ngashintsha igama lefayela ledatha bese ngisebenzisa i-Outlook. I-Presto isebenze. Ngibona kakhulu
Ngihlabeke umxhwele ngokusebenziseka kalula nokululama okusheshayo kwefayela. Noma kunjalo, angisayidingi, ngakho-ke ngiyivulile ngemuva kwamafayela amabili
Ngihlabeke umxhwele ngokusebenziseka kalula nokululama okusheshayo kwefayela. Noma kunjalo, angisayidingi, ngakho-ke ngiyivulile ngemuva kokutholwa kwamafayela amabili.
UVictor Ramón RG
I-Leioa, Bizkaia, Spain
Siyabonga ngomkhiqizo wabantu abancane abanenkinga enkulu.
Ngisebenzise ukulungisa kwakho kwe-Outlook.
Usosayensi Osewathatha Umhlalaphansi
Ukube nje abanye abantu bebekwenza lokhu ngempumelelo.
Septemba 1st, i-2020
RAR ifayela le-115 GB: lilimele ngokuphelele ...
Uhlelo lwakho luyilungisile ngamahora ama-5 nangama-33 amaminithi ...
1K ngiyabonga !!
UPaul Van den Bossche
Ikhithi yethu yokuthuthukisa isoftware (i-SDK) ingakusiza ukuthi uhlanganise ubuchwepheshe bethu bokutakula idatha obungenakuqhathaniswa nesoftware yakho ngokukhululekile.
Uhlu lwamakhasimende oluphelele
DataNumen SQL Recovery 6.0 ikhishwa ngoJuni 22, 2021
DataNumen Archive Repair 3.8 ikhishwe ngoMeyi 16, 2021
DataNumen TAR Repair 3.0 ikhishwe ngoMeyi 11, 2021